Eid al - Adha konke......
موضوع: Eid al - Adha konke...... الجمعة سبتمبر 01, 2017 7:49 pm
Eid al-Adha iwela 10 Dhu al-Hijjah, apho ihlabathi Muslim ubhiyozela esi sihlandlo lonke phezu komhlaba, yaye isebenza de 13 Dhu al-Hijjah, apho ekupheleni bahambi kwezithethe phambi kwakhe imini enye, imihla yokugqibela elo Hajj, apho ukuphakama ezi zithethe nge 9 Dhu al-Hijjah, nto leyo Abahambi bahamba beya eNtabeni iArafat.
Ihlabathi lamaSilamsi libhiyozela ngokubambisana kunye nokuma kwesi sikhundla, kunye neentsuku zokuqala zomthendeleko, abahambahambayo e-Muna, banikela imibingelelo ebusweni bukaThixo. Yaye kunye nabo bonke amaSulumane abanamandla kuzo zonke iindawo zomhlaba. Ukusuka apha yaba nokuthiywa yale holide Eid al-Adha, nokuba imibingelelo emikhulu ukuba ixhelwa wenyusa inani umbingelelo zithiywe Abraham, ngubani na ukuba amsike unyana wakhe uIshmayeli ukuphendula kwisicelo kaThixo lowo wamkhululayo uIshmayeli Bkpc awazincamayo ngenxa ebusweni bukaThixo.
Imikhosi ye-Eid al-Adha iqala ngomthandazo we-Eid ngentsasa ngosuku lokuqala lwemithendeleko yomhla womine. Lo mthandazo kufuneka ukwenziwa kwintlanganiso engaphandle kweMosque, kwaye ivumelekile kwimikhosi. Kwakhona, emva kokuba benze umthandazo, amaSulumane asasazeka ukuba anikele imibingelelo yabo ngokuhambelana nevesi leQur'an: "Sikunika iKawthar,
AmaSilamsi wasebenzisa kubulisa omnye kamsinya nje uwagqibe imithandazo Eid apho wonke Muslim Muslim ukuxhawula esithi "UThixo wamkela kwethu nani," yaye "qho ngonyaka kwaye entle." Basebenzisa ukutyelela nokuxhasa izihlobo zabo. UJubair bin Nafir wathi: